Ndị na -emepụta Hitachi | China Hitachi Suppliers & Factory
ịwụ excavator ịwụ ZX200 yana mgbakwunye nkwụnye ezé ịwụ
Bọketị ọkpụkpụ ọkpọ ọkpụkpụ SK200 0.9 nwere ihe mgbakwunye excavator ezé ịwụ ise. Nnukwu ogbako ihe nrụpụta ịwụ, ezigbo mma yana mgbe ọrụ ahịa gasịrị.Aili rụpụtara kemgbe 1980.
TB00822 EX350 Nweta ezé ngwongwo ndị na -egwu ihe
TB00822 EX350 Nweta ezé ngwongwo ihe mkpuchi ihe, ihe nchara alloy, ịdị mma, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma. Aili tinyere onwe ya na mpaghara Spare parts Casting and Forging area 40 afọ. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
Nchedo ZX450 Blade maka ezé nkwado akụkụ akụkụ ahụ
Nchekwa agụba ZX450 maka ezé nkwado akụkụ akụkụ ahụ, akụkụ na ọrụ ga -ekwe nkwa. Aili tinyere onwe ya na mpaghara GET Spare parts Casting and Forging area 40 afọ, na -ebupu ya karịa mba 100. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
ZX330 Onye na -echebe akụkụ Rib maka ngwa dị arọ
ZX330 Onye na -echebe akụkụ Rib maka akụrụngwa dị arọ, ịdị mma na ọrụ ga -ekwe nkwa. Aili tinyere onwe ya na mpaghara GET Spare parts Casting and Forging area 40 afọ, na -ebupu ya karịa mba 100. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
Ihe nchekwa EX200 maka igwe ihe eji arụ ụlọ
Ihe nchekwa EX200 maka mgbakwunye akụrụngwa akụrụngwa, mma na ọrụ ga -ekwe nkwa. Aili tinyere onwe ya na mpaghara GET Spare parts Casting and Forging area 40 afọ, na -ebupu ya karịa mba 100. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
2014503 2014504 EX200 oghere oghere excavator ịwụ akụkụ ịkpụ
2014503 2014504 EX200 oghere olulu excavator bọket n'akụkụ akụkụ, ihe nchara alloy, ịdị mma, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma. Nrụpụta Jiangxi Aili kemgbe 1980, nwere olile anya ịbụ onye gị na ndị enyi ogologo oge.
3053596 3053595 EX70 3 oghere oghere n'akụkụ oghere maka ihe ndị na -egwupụta ihe
3053596 3053595 EX70 3holes cutter side for excavator spare parts, alloy steel material, mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma. Nrụpụta Jiangxi Aili kemgbe 1980, nwere olile anya ịbụ onye gị na ndị enyi ogologo oge.
H401367H-ZX230-5 ndụmọdụ ịwụ excavator maka akụrụngwa Hitachi dị arọ
H401367H-ZX230-5 ndụmọdụ ịwụ excavator maka akụrụngwa Hitachi dị arọ, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma. Aili tinyere onwe ya na mpaghara Spare parts Casting and Forging area 40 afọ. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
EX210 CK90 TB00705 TB00705RC nweta ezé ịwụ akụkụ ịwụ
EX210 CK90 TB00705 TB00705RC nweta ezé ịwụ akụkụ, ihe nchara alloy, ịdị mma, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma. Aili tinyere onwe ya na mpaghara Spare parts Casting and Forging area 40 afọ. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
205-70-74272 35S Oke ịwụ nha nha nha PC200 ZX200
205-70-74272 35S Top pin ịwụ Nha nha PC200 ZX200, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo oge, ntụkwasị obi ka mma, na-eji ahịrị mmepụta akpaka zuru oke, ọdịdị mara mma nke ukwuu. Ụlọ ọrụ Jiangxi Aili malitere na 1980, na -atụ anya ịbụ onye gị na ndị enyi ogologo oge.